महिला हिंसा विरुद्ध : रातो सारी र कालो ब्लाउज - KHASOKHAS
– दीपक परियार
‘रातो’ परिवर्तन को प्रतीक हो । ‘कालो’ विरोध को संकेत हो। संसारभरका महिलाहरू ले महिला माथी हुने सबैखाले उत्पीड़न र विभेदका विरुद्ध फरक, फरक शैलीमा आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन। त्यसै सन्दर्भमा न्यूजर्सी राज्यको जर्सी सिटी शहर मा पनि अमेरिकन, साउथ एशियन महिलाहरूले रातो सारी र कालो ब्लाउज लगाएर यस पटक यौन हिंसा र सबै खाले विभेदका विरुद्ध आवाज उठाए ।
Care point health, बाट संचालित बोलो बहन ( speak sister ) द्वारा आयोजित कार्यक्रम मा अमेरिकन राजनीतिज्ञ, कूट्िनतीज्ञ, मानवअधिकारवादी, साहित्यकार, पत्रकार , कलाकार , सामाजिक कार्यकर्ता , उधोगी व्यापारी , युवा तथा विद्यार्थीहरु को बाक्लो उपस्थिति थियो।
सबै वक़्ताहरूले एक स्वरमा सामाजिक न्याय र समानताका लागी , महिला माथी हुने हरेक प्रकारका शोषण दमनका विरुद्ध आवाज उठाए
बोलो बहन का कार्यक्रम संयोजक डा. विष्णुमाया परियार ले पहिला आफ्नो घर बाट नारी प्रति सम्मान गर्न अपील गर्दै , घर बाट नै महिला माथी हुने हिंसा रोकिए । एऊटा ठुलो परिवर्तन हुने बताईन । यो रातो सारी कार्यक्रम पनि संघर्ष को रूप भएको भन्दै समाज मा रहेको कुरुतिलाई हटाऊँन पुरुषहरू को साथ सहयोग आवश्यक छ। आउनूहोस यो महान अभियानमा सहभागी बनौं । उनले आग्रह गरिन !!
भ्यालेन्टाइन डे नजिकिदै गर्दा ललितपुर पाटन दरवारपरिषरमा बेफिकर जोडी !